Geerida curadka Fidel Castro iyo Kala qeybsanaanta qoyskaas - BBC News Somali
Geerida curadka Fidel Castro iyo Kala qeybsanaanta qoyskaas
5 Febraayo 2018
Image caption Castro iyo wiilkiisa
Dhaqan ahaan Cuba Wiilka kowaad waxaa loogu magac daraa Aabaha misa Awowgiis.
Markii uu dhashay Fidel Angel Castro Diaz_Balart waxaa loogu magac daray aabihis iyo awowgiis, aabihis waxaa lagu yaqaanay hamigiisa siyaasadeed iyo awowgiis oo ahaa soogalooti ka yimid Spain oo kadib ka noqday nin taajir ah.
Qarnigii 20-aad aabihiis wuxuu ka mid noqday wa jiyaha ugu caansan , asaga oo bilaabay in uu kala qaybiyo fikradaha ku aadan dagaalkii qaboobaa.
Wuxuu kuguulaystay inuu gabi ahaanba noqdo shaqsi aan waxbo laga ogaan karin ilaa dhimashasidii sanadki 2016-kii.
Xilligii isku diyaarinta bilowga kacaanka ayaa wuxuu qaatay go'aankiisii koowaad oo ku aadan wiilkiisa.
Isaga oo ay horay u kala tageen Fideliyo hooyadiis, Mirta Diaz-Balart, waxa uu ka shaqeeyay sidii wiilkiisa uu uga soo booqan lahaa dalka Mexico oo uu markaas ka abaabulayay kacdoonkii lagu afgambinayay xukunkii kaligii taliska ee Batista ee magaalada Havana.
Tallaabo adag oo la qaado
Ma noqonayso xilligii ugu danbaysay oo Fidel Castro uu u gacan bir ah ku qabto arrimaha qoyskiisa ,wuxuu ku guulaystay in uu wiilkiisa aqoon ka hello Midowga Soviet, halkii uu hooyadis la dagi lahaa waddanka Spain ama uu aadi lahaa Maraykanka.
Dhimashadii Jimcaha ku timid Fidelito, waxaa lala meel dhigay sida isaga oo ah ilmo uu dhalay heesaa caan ah, balse xaqiiqda ahaa in wiilkan uu wax kasta ka ahaa dalka Cuba.
Wuxuu ku lug lahaa noolasha Cuba dhinac kasta ,siyaasadada,dhaqaalaha iyo dhaqanka taas oo ay dadka u qaateen sida in uu yahay Illaahay haddii kale Nabi. Waxa uu ahaa qofka koowaad oo ay codkiisa maqlaan marka ay raadiyaha daaraan iyo qofka ugu dambeeya ee ay codkiisa maqlaan marka ay seexanayaan.
Waligeed looma malaynin in Fidelito uu gashan doono kabaha buutka ee jabhadnimada ee aabihiis, balse waxaa markasta hoosta laga xariiqi jiray in ay jiraan waxyaabo ay isaga mid yihiin, taas oo dabcan ku adkaatay in uu lasii noolaado.
Xitaa markii uu noqday seeynisyahan guulo badan ka gaaray xagga hubka nuyuukleerka, waa ay u suurtogali weysay in uu iska reebo hooskii aabihiis.
Waxaaba xitaa jirtay in uu mar aabihiis ka xayuubiyay xilkii ahaa madaxa hay'adda barnaamijka hubka nuyuukleerka ee jasiiradan Cuba, isaga oo lagu eedeeyay 'xil gudasho la'aan', taas oo muujinaysa in uu faaska ku goyn karo haddii loo baahdo xitaa qof ka mid ah qoyskiisa si loo horumariyo danaha kacaanka.
Kala Qeybsanaanta Qoyska
Image caption Lincoln iyo Mario
Waxaa jiray xiiriiro kale oo dhinaca qoyska ah ,mana jirin qoys sidaas aragtidooda u kala duwanyihiin oo aan ka ahayn kan reer Castro Diaz-Balart.
Markii ay kala tageen waalidkiis, hooyadiis Mirta waxay u guurtay Spain ,walalkeed Rafeal Diaz-Balart, oo uu Castro aad u necbaa, ayaa waxa ka tirsanaa dowladdii Batista.
Maanta wiilashiisa Lincoln iyo Mario waxay kamid yihiin xildhibaano laga soo doorto gobolka Florida ee dalka Maraykanka, waxay matalaayan kuwa kasoo horjeedo siyaasadaha Catro ee dhinaca Cuba.Waa ilma adeerada Fidelito laakiin wali mid ka mid ah ma uusan u soo tacsiyadaynin .
Waxyaabaha aanan laga hadlin
Image caption Curadka Castro
Waxaa jiray cadaadis dhinaca masuuliyadda xafiiska ilaa xiligii yarantiisa , iyo mararka qaar oo ay qoyska ku dhaceen masiibooyin, Labada wiil ee curadka ah abadii wiil ee curadka ah Fidelito iyo John jr Kennedy , waxaa laga yaabi lahaa in ay waxyaabo badan isaga mid noqdaan haddii ay fursad u heli lahaayeen in sigaar isla dhuuqaan (wada noolaadaan).
Ka dib tobabarkii dheeraa ee Midoowga Soviet , Fidelito wuxuu noqday nin qibrad leh,ku hadla luuqada Ingriiska ,Ruushka,Faransiiska iyo Isbaanishka.
Waxaa loo aqonsanaa in uu yahay midka ugu wanaagsan dhinaca sayniska , kadib dadaalo loo galay in lagu daaweeyo ayey timid dhimashadii aabihiis taas oo keentay inu is dilo.
Is dilkaan ayaa loo aqoonsayahay wadanka Cuba inuu yahay waxyaabaha aan laga hadlin ,mar ayaa waxaa loo tix galiyey inuu yahay kacaan diid kaas oo ah caadi ka ahaan in laga soo wariyo dhinaca jasiirada.
Fidelito Castro waxaa lagu xasuusan doonaa inuu ahaa ruux isku da yey inuu magaciisa ka dhigo midka ugu wanaagsan, inkasta oo uu aad u cuslaa magaca la siiyay (ee qoyska).